Tomato elekọta | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Tomato elekọta
Nzube ịgha mkpụrụ maka tomato bụ, n'ezie, mkpụrụ ha, nke ndị ọrụ ubi na-aṅa ntị na ya. Otú ọ dị, a ghaghị ịghọta na maka ezigbo owuwe ihe ubi, nke mbụ, ọ bara uru na-eto eto ndị magburu onwe ya, nke na-achọ ka nri fatịlaịza na-abụkarị. Ejiri mkpokọta nke osisi a dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile, ya mere, n'okpuru ebe anyị tụlere ụdị fatịlaịza ị chọrọ iji zụọ tomato.
Kedu esi esi nri tomato, tomato fatịlaịza mgbe ọ kụrụ n'ala
Mgbe tomato na-eto eto, isi ọrụ nke ubi ahụ bụ iji nweta osisi dị elu. Otú ọ dị, iji nweta osisi tomato sitere na seedlings, ọ ka dị mkpa ịnye nlekọta dị mkpa, na karịsịa nri nri mgbe niile. Ya mere, n'okpuru ebe a, anyị ga-atụle otú e si esi nri tomato mgbe ọ kụrụ n'ala, mgbe ọ ga-eme ya na otu esi.
Kedu ka esi etinye mkpụrụ osisi na griin ha, na ihe kpatara eji eme ya
Igwu tomato na-enye aka ime ka mkpụrụ nke ihe oriri ahụ dịkwuo mma ma chebe ya pụọ ​​n'ọrịa dị iche iche. Ma ka usoro wee mepụta nsonaazụ ndị a na-atụ anya ya, onye kwesịrị ịma mgbe na otu esi eme usoro a n'ụzọ ziri ezi iji nye osisi ndị nwere ihe oriri dị mkpa. Na esi etinye tomato n'ime griin ha, anyi ga-agwa n'ihu.
Yist dị ka fatịlaịza maka tomato
Yiri bụ ihe nkịtị maka nri anyị. Anyị na-eri ya mgbe niile na ihe ndị e ji esi nri, achịcha, kvass, na ọtụtụ nri ndị ọzọ. N'eziokwu, ogwu bụ ihe ndị na-atọ ụtọ na protein, iron, macro- na microelements na amino acids. Ị ma? Yiri bụ ezigbo ihe na-akpata ọtụtụ nje bacteria nwere ike ime ka mmepe nke osisi dịkwuo elu ma bụrụ ihe na-akpali akpali nke nnwere onwe ha.
Ntughari "Kvadris": ntuziaka maka iji ọgwụ
O siri ike inweta ezigbo owuwe ihe ubi ma ọ bụrụ na ejighị ọgwụ eji egwu egwu eme ihe ọ bụghị naanị na ịlụso ọrịa ọgụ, kamakwa igbochi ọdịdị ha. Ọ bụ ngwá ọrụ dị oke mkpa ma bụrụ "Kvadris" - a fungicide, ntụziaka maka iji nke anyị na-akọwa na isiokwu dị n'okpuru ebe a.
"Lazurite": ntụziaka maka iji ọgwụ maka ata
Chemicals, nke a maara n'okpuru aha ahihia ndị a na-akpọkarị, ụmụ mmadụ agbakọtawo iji merie ahịhịa niile dị na mbara ala. Nke a na-akọwa mkpa ọ dị iji nlezianya na nlezianya na-elekọta ndị ọrụ a mgbe itinye ha n'ọrụ. N'ọrụ ọrụ ugbo, a na-eji arụmọrụ nke ịhọrọ (selective) eme ihe, nke na-enye gị ohere ịga nke ọma na-emeso ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ata.
Kedu esi akụ tomato, jiri usoro Terekhin
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-elegharị anya mgbe nile maka ịzụlite ụfọdụ ihe ọkụkụ, n'ihi ya, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ịgha mkpụrụ tomato site n'usoro nke Terekhina natara mgbasa ozi zuru ezu. Ekwesiri ighota na enwere echiche di iche banyere okwu a, ebe ndi oru ubi na-eto usoro ahu ma huta uru ndi ozo jiri mee ihe, ndi ozo na eche na ihe di iche iche banyere nka.
Kedu ka esi eme nke ọma na ugboro ole ka mmiri tomato na-emeghe n'ala
A na-ewere tomato dị ka mkpụrụ osisi na-adịghị mma nke nwere ike ịmị mkpụrụ ọbụna ma ọ bụrụ na enweghị onye nlekọta anya. Otú ọ dị, e nwere otu "ma" - iji nye mkpụrụ kachasị elu nwere ike ọ bụ naanị osisi ndị ahụ, maka nlekọta kwesịrị ekwesị. Na tomato choro ihe nile n'adighi ido oke - zuru oke maka mmepe nke mmezi na ichikota.
Na-agba tomato na mmiri boric: kedu na ihe mere eji edozi tomato
Iji na-eto eto tomato na oge okpomọkụ gị, ọ dịghị mkpa iji oge buru ibu na ya. Maka osisi dị elu, ọ bụ ịzụta osisi, yana nlekọta kwesịrị ekwesị, n'ihi ya, ị ga-enweta ọganihu bara ụba. Ka anyị hụ otú e si eji osisi boron eme ihe maka osisi. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ịghasị ifuru ga-echebe mkpụrụ osisi ahụ site na ọrịa dị iche iche.
Ntuziaka maka iji ọgwụ "Bitoxibacillin"
Dị ka ihe ọ bụla dị ndụ, osisi nwere ike ịrịa ọrịa na mkpa ọgwụgwọ. Ọrịa dị iche iche nwere ike ịkpata nje bacteria, nsị na ụmụ ahụhụ. Enwere otutu ụmụ ahụhụ na-enwe mmasị iri osisi. Ụfọdụ na-ahọrọ mgbọrọgwụ, akwụkwọ ndị ọzọ na buds. Ụfọdụ ị nwere ike ịhụ, ma ndị ọzọ enweghị ike ịchọta.
Gwa tomato na griin ha, otu esi enweta nnukwu ihe ubi tomato
Na-eto eto tomato na griin haus, ị nwere ike ịmalite ịmalite ịmalite, nakwa belata ọnwụ nke ihe ọkụkụ na ntu na ọrịa ndị nwere ọrịa. Otú ọ dị, ọbụna na-eto eto akwụkwọ nri na griin haus chọrọ nhazi iji mepụta ọnọdụ kacha mma maka ya. Mkpụrụ tomato a na-etinye na griin ha bụ usoro nke agrotechnical dị mkpa iji meziwanye usoro nke na-emepụta ihe ọkụkụ ma na-amụba ọtụtụ.
Ọ ga-ekwe omume na-eto eto tomato na-enweghị mmiri
Na Intanet, e nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi na-eto tomato. Onye ọ bụla na-eme ihe oriri na-emepụta nri na-achọ ịchọta usoro nke ga-eweta ọnụ ọgụgụ kachasị elu na ego kachasị ụgwọ. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-akwalite mkpuru tomato n'enweghị ịgbara mmiri. Ka anyị hụ ihe usoro a bụ.
Utu kacha mma maka tomato tomato na akwukwo
Tomato na ose so n'ime ubi a na-ewu ewu, nke a na-achọta na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla. Ha dị ụtọ ma nwee nnukwu vitamin nke ahụ anyị chọrọ. Iji nweta ezigbo ihe ubi nke akwụkwọ nri ndị a, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị iji kụzie ha n'ụzọ ziri ezi, kama iji fatịlaịza seedlings n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Kedu otu na ihe mere ejiri kporo tomato n'ime griinye polycarbonate
Tomato, mkpụrụ osisi a maara nke ọma na South America dum, na-ewu ewu maka ezigbo ihe kpatara ya. Ọ bụghị nanị jupụtara na micro na macro ndị bara uru, vitamin na antioxidants, ma "na-ewepu" thrombosis, mmechi mgbachi na varicose veins, bara uru maka usoro obi na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike. Ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndina nke tomato gị, ị kwesịrị icheta ha.
Olee otu na ihe mere eji etinye tomato n'ime ala
Ndị ọrụ ugbo niile na-emepụta ihe dị iche iche n'ubi ha na-akụnye ihe ndina maka ihe oriri akwukwo nri - tomato. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na mkpụrụ osisi a n'onwe ya na-akpali mmasị. Ụdị dịgasị iche iche - ma ndị toro ogologo ma ogologo. Na mpaghara ebe anyị na-akụ na-achịkwa mkpụrụ osisi tomato, nke na-enye mkpụrụ buru ibu.
Ugboro ole ka esi etinye mmiri na tomato na griin ha maka ezigbo owuwe ihe ubi
Mgbe na-eto eto tomato na greenhouses, atọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa agronomic jikoro. Ọ dị ma ọ bụ na ị na-emepụta akwụkwọ nri nke ọma na ezi ọganihu ha na ezi owuwe ihe ubi na-adabere. Dika ihe ndi ozo si kwuo, ndi oru ugbo achikota otutu aro banyere otu na mgbe o kacha mma iji mee ka tomato di na griin ha, na onodu iru uzo kwesiri ka ha buru ibu.
Kedu otu esi etinye nri n'oge nri?
Mgbe ụfọdụ ọ na-eme na maka ezigbo akwụkwọ nri ihe ubi chọrọ obere enyemaka. Dịka ọmụmaatụ, mgbe tomato malitere ịmị mkpụrụ, ha nwere ike ịchọrọ nri ọzọ: ọ bụrụ na ala adaala, tomato etoola na saịtị ahụ ruo ọtụtụ afọ ma ọ bụ mpempe ndị yiri nke ahụ emebeghị tupu oge eruo.
Ije ozi bụ otu n'ime ihe ndị ga-enyere aka mee ka mkpụrụ tomato buru ibu ma mee ka mkpụrụ osisi ahụ dịkwuo ukwuu. O nweghị onye na-elekọta ubi nwere ike ime n'enweghị ya. Kedu ihe bụ usoro a na otu esi eme ya - gbalịa chọpụta ya. Ihe mere tomato tomato ji esi nri - nke a bu iwepu ahihia nke osisi sitere na mkpado osisi nke na-eto n'etiti ndi abuo abuo.